Filling Sealing & (Un) Packing ထုတ်လုပ်သူ & ပေးသွင်းသူများ - China Filling Sealing & (Un) Packing Factory
အရောင်းရဆုံး Single Head Semi-automatic Paste Filling Machine Stainless Steel Bottle Filling Machine
ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်မှုအကာအရံပါရှိသော အလိုအလျောက် multi-head inline ဖြည့်စက်သည် မိုက်ခရိုကွန်ပြူတာ၊ ဓာတ်ပုံလျှပ်စစ်အာရုံခံကိရိယာနှင့် pneumatic execution တို့ဖြင့် ပရိုဂရမ်ထုတ်နိုင်သော နည်းပညာမြင့် ဖြည့်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။လျှောက်လွှာ- အစားအသောက်နှင့် အဖျော်ယမကာ၊ ချက်လုပ်နည်း၊ ဆေးဝါး၊ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များ၊ တို့ဟူး၊ ဂျယ်လီ၊ ပူတင်း၊ သစ်သီးဖျော်ရည်၊ နို့၊ နို့ဒိန်ချဉ်၊ အအေးအချိုရည်များနှင့် အခြားသော လုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုသည်။ပဲငံပြာရည်၊ ရှာလကာရည်၊ ဝိုင်ဖြူ၊ အရက်၊ ဓာတ်ပစ္စည်းများ၊ ဆပ်ပြာများ၊ ပိုးသတ်ဆေးများ၊ ချောဆီများနှင့် c...
အလိုအလျောက်သေးငယ်သောအိတ် Granule အမှုန်ဆန်ထုပ်ပိုးခြင်းစက် ဟိုတယ်သကြားဆား Granules ကော်ဖီထုပ်ပိုးစက် OEM ODM ရရှိနိုင်
အလိုအလျောက်အိတ်သေးသေး အမှုန်အမွှား ကောက်နှံထုပ်ပိုးသည့်စက် ဟိုတယ်သကြားဆားမှုန့် ကော်ဖီထုပ်ပိုးစက် အစားအသောက်၊ ဆေးဝါးနှင့် ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများတွင် လျော့ရဲသော၊ စေးကပ်မှုမရှိသော၊ ကောင်းမွန်သောအမှုန့်များကို အလိုအလျောက်ထုပ်ပိုးရန်အတွက် သင့်လျော်သည်- ဟင်းချို၊ granules၊ desiccant၊ monosodium glutamate၊ သကြား၊ oatmeal၊ အစားအသောက်ထည့်ပစ္စည်း၊ နို့မှုန့်၊ ပဲနို့၊ ကြက်ဥဖြူမှုန့်၊ တရုတ်တိုင်းရင်းဆေးမှုန့်၊ မျက်နှာဖုံးမှုန့်၊ ကျန်းမာရေး လက်ဖက်ခြောက်မှုန့် စသဖြင့် ထုပ်ပိုးမှု ပို့ဆောင်ရေး အဘယ်ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို ရွေးချယ်ပါသနည်း။
သစ်သီးဝလံများနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ အလေးချိန်နှင့် ထုပ်ပိုးသည့်စက် စိတ်ကြိုက် ဘက်စုံသုံး ပေါင်းစပ်စကေး
အသီးအနှံများနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ အလေးချိန်နှင့် ထုပ်ပိုးခြင်းစက် စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော ဘက်စုံသုံး ပေါင်းစပ်စကေး ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် ပေါင်းစပ်အကွာအဝေး : 8 ~ 12000g အပိုင်းတစ်ခုစီအတွက် ယူနစ်တစ်ခုစီအတွက် 8 ~ 12000g အကွာအဝေး- 1500g အနိမ့်ဆုံး ရုပ်ထွက်- 0.1g မြန်နှုန်း- 10~30 ကြိမ်/မိနစ် စကေးအရေအတွက် : 12 ဦးခေါင်း (စိတ်ကြိုက်လုပ်ဆောင်မှု) .။
Pouch Bag Can Glass Jar Bottle Dosing Filling & Capping Machine
အိတ်ထည့်နိုင်သော ဖန်ပုလင်းပုလင်း ဖြည့်သွင်းခြင်းနှင့် ထုပ်ပိုးခြင်း စက် ဖြည့်ခြင်း ပစ္စည်း- ဖျော်ရည်/ငါးပိ ထုပ်ပိုးမှုပုံစံ- လေပက်အိတ်/ဖန်ပုလင်း/ပုလင်း Calibre: 8.6 မီလီမီတာ စက်ထုပ်ပိုးမှု သတ်မှတ်ချက်- ထုပ်ပိုးမှု ဖြည့်သွင်းနိုင်စွမ်း၊50-200ml(စိတ်ကြိုက်) ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်; တစ်နာရီလျှင် 9000-12000 စက်လည်ပတ်နေပုံ ဖော်ပြချက် အော်တိုအိတ်ကပ်တည်နေရာ ရှာဖွေခြင်း → အလိုအလျောက် ဆေးဖြည့်ခြင်း → အလိုအလျောက် လေဆင်နှာမောင်း သန့်ရှင်းရေး → အလိုအလျောက် ဦးထုပ် ကျွေးခြင်းနှင့် ထည့်သွင်းခြင်း (ဓာတ်လှေကားပါသော ဦးထုပ်ပါရှိ) → အလိုအလျောက် အဖုံးစွပ်ခြင်း (torque ထိန်းချုပ်ရန် ဆာဗိုမော်တာ ထည့်သွင်းခြင်း ) → ဖြုတ်...
အလိုအလျောက် Rotary Bag ပေးသော Granule Solid Weighting Packing Machine
အလိုအလျောက်လှည့်ပတ်ပေးသော Granule အခဲအလေးချိန်ထုပ်ပိုးသည့်စက် ဤကိရိယာတွင် အိတ်အလိုအလျောက်ထုပ်ပိုးသည့်စက်များ၊ အသိဉာဏ်ပေါင်းစပ်အလေးချိန်စက်၊ ပုံးဓာတ်လှေကား၊ ထုလုပ်ထားသည့် အလုပ်လုပ်သည့်ပလပ်ဖောင်း၊ အဓိကအားဖြင့် အစိုင်အခဲ၊ သေးငယ်သော၊ ထုထည်ကြီးမားသောပစ္စည်းများနှင့် အလေးချိန်အမျိုးမျိုးအတွက် အဓိကသက်ဆိုင်ပါသည်။ပွက်ပွက်ဆူနေသောအစားအစာများ၊ သရေစာများ၊ အခွံမာသီးများ၊ အစေ့များ၊ ဗာဒံစေ့များ၊ pistachios၊ ထင်းရှူးစေ့များ၊ သကြားလုံးများ၊ ဂျယ်လီ၊ ပဲများ၊ အစားအစာများ၊ အေးခဲထားသောအစားအစာများ၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာများ၊ အမျိုးအစားအားလုံး၊ ဟာ့ဒ်ဝဲပစ္စည်းများနှင့် automati ကဲ့သို့သော အခြားပစ္စည်းများ။
အမြန်စားနပ်ရိက္ခာသေတ္တာ ထုပ်ပိုးခြင်းစက် အလိုအလျောက် နိုက်ထရိုဂျင်ဖြည့် တံဆိပ်ခတ်ထုပ်ပိုးခြင်းစက်
အမြန်စားနပ်ရိက္ခာသေတ္တာ ထုပ်ပိုးခြင်းစက် အလိုအလျောက် နိုက်ထရိုဂျင် ဖြည့်ခြင်း အလုံပိတ်ထုပ်ပိုးခြင်း စက် မြန်နှုန်း- 3-4 အပိုင်း/မိနစ် အထွက်- 720-960 ပုံး/နာရီ ထိန်းချုပ်မှုစနစ်- PLC ထိန်းချုပ်မှုပုံစံ- အပေါ်နှင့်အောက် ပေါင်းစပ်ထားသော အလူမီနီယမ်အလွိုင်းမှိုများသည် မြင့်မားသော ခိုင်ခံ့မှုနှင့် သံချေးတက်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး၊ အစားအသောက် တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှု လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီခြင်း။ထုတ်ကုန်ဖွဲ့စည်းပုံ 1. ဂီယာပစ္စည်း- သန့်စင်သော SUS304 သံမဏိ၊ အကာအကွယ်ပြားအထူ 1.5 မီလီမီတာ၊ အလူမီနီယမ်အလွိုင်း 2. AirTAC ဆလင်ဒါများ၊ အနုမြူ အဆို့ရှင်များ။3. AirTAC Solenoid Valveအစားအသောက်အဆင့် လစ်လပ်...
Semi-automatic Cling Film ထုပ်ပိုးစက်
Semi-automatic Cling Film Packaging Machine ဤထုပ်ပိုးစက်သည် တစ်မိနစ်လျှင် ပျမ်းမျှ 15 packs ထုပ်ပိုးနိုင်ပြီး ထုပ်ပိုးမှုစွမ်းဆောင်ရည်သည် လက်လုပ်လက်စားထက် သုံးဆခန့်ဖြစ်သည်။ကိုယ်တိုင်လုပ်သည့်အလုပ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက၊ ထုပ်ပိုးမှုသည် ပိုမိုခိုင်မာပြီး ပိုမိုလှပပြီး စည်းစည်းလုံးလုံးဖြင့် အမှတ်တံဆိပ်တန်ဖိုးကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။၎င်းသည် ပလပ်စတစ်ထုပ်ပိုးခြင်း (PVC/PE) အမျိုးအစားအားလုံးအတွက် သင့်လျော်ပြီး ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည်။၎င်းကို ဗူးခွံများဖြင့် သို့မဟုတ် မပါဘဲ ထုပ်ပိုးနိုင်ပြီး ပုံစံမျိုးစုံ (ဥပမာ အဝိုင်း၊ ဆဋ္ဌဂံစသည်) ဗန်းများအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။
အဖျော်ယမကာထုတ်လုပ်မှုလိုင်းအတွက် ပလတ်စတစ်ပုလင်း ကာဗွန်နိတ်အဖျော်ယမကာဖြည့်စက်
အဖျော်ယမကာထုတ်လုပ်ရေးလိုင်းအတွက် ပလပ်စတစ်ပုလင်း ကာဗွန်နိတ်အဖျော်ရည်ဖြည့်စက် Jumpfruits သည် စျေးကွက်ကိုဦးတည်သော၊ နည်းပညာကို ဦး ဆောင်သော၊ အရည်အသွေးကိုဦးတည်သော၊ ဝန်ဆောင်မှုကို အာမခံသည်၊ အသံအရည်အသွေးအာမခံမှုစနစ်ကို ထူထောင်ကာ ပြီးပြည့်စုံသော စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် စစ်ဆေးရေး အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ တပ်ဆင်ထားသော ကျွန်ုပ်တို့တွင်၊ အရည်အသွေးမြင့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ထုတ်လုပ်မှု လုပ်သားအင်အား၊ ဒီဇိုင်းနှင့် ထုတ်လုပ်မှုတွင် အတွေ့အကြုံကြွယ်ဝသော လုပ်သားအင်အား။ကျွန်ုပ်တို့သည် ကာဗွန်နိတ်အဖျော်ယမကာအမျိုးမျိုး၊ သန့်စင်သောရေ၊ သတ္တုတွင်း...
Semi Automatic Single Head Double Heads BIB Filling Machine Bag In Box Filler
Semi Automatic Single Heads Double Heads BIB Filling Machine Bag In Box အဖြည့်ခံ စွမ်းရည်- 60-80 အိတ်/နာရီ (20kg အတွင်း) တိုင်းတာမှုနည်းလမ်း- အလေးချိန် အမျိုးအစား အလေးချိန်ဖြည့်ခေါင်းအရေအတွက်- တစ်ခုတည်း သို့မဟုတ် နှစ်ဆ ပါဝါအရင်းအမြစ်- AC220V±10% ပါဝါ- ≤0.2KW ဖြည့်စွက်တိကျမှု- ≤ ± 30- ± 50g
Semi-automatic Horizontal Self Suction Stand Up Pouch Filling Machine Juice Jam Chocolate Filling Machine
Semi-automatic Horizontal Self Suction Stand Up Pouch Filling Machine Juice Jam Chocolate Filling Machine ဤစီးရီးများကို ဆေးဆိုင်၊ အလှကုန်၊ အစားအစာနှင့် မတူညီသော စက်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်များတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုခဲ့သည်။အရည်များ၊ ပျားရည်များ မြင့်မားသော အရည်များနှင့် ငါးပိများအတွက်၊ ဤစက်သည် ပျားရည်၊ ဖျော်ရည်၊ ယို၊ ဂျယ်လီနှင့် ချောကလက်အတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။Semi-automatic full horizontal filling machine သည် လျှပ်စစ်ပေါင်းစပ်/ အပြည့်အဝ pneumatic semi-automatic ဖြည့်စက်များ၏ စီးရီးတစ်ခုဖြစ်သည်။
ရေသန့်ဖျော်ရည်ဖျော်ရည်အတွက် BIB Filler Sealer အလိုအလျောက် အိတ်အတွင်းထည့် အလုံပိတ်စက်
အလိုအလျောက် အိတ်တွင်း-သေတ္တာ အဖြည့်အပိတ် တံဆိပ်ခတ်စက် BIB Filler Seale ဤစီးရီးများကို အိတ်အတွင်းထည့်၍ ထုပ်ပိုးနိုင်သော လိုက်လျောညီထွေရှိသော ထုပ်ပိုးခြင်းအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ ကုမ္ပဏီမှ ဒီဇိုင်းထုတ်ပြီး ထုတ်လုပ်ပါသည်။၎င်းသည် မြင့်မားသော တိကျမှန်ကန်မှုနှင့် ဖြည့်သွင်းမှုပမာဏကို ချိန်ညှိခြင်းနှင့် အဆင်ပြေသော ဆက်တင်နှင့် ချိန်ညှိမှုရှိသော မြင့်မားသော တိကျသောစီးဆင်းမှုမီတာ တိုင်းတာခြင်းနည်းလမ်းကို အသုံးပြုသည်။ဤစက်၏ဒီဇိုင်းသည် သိပ္ပံနည်းကျဖြစ်ပြီး ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပြီး အလိုအလျောက်စနစ်၏အဆင့်သည် မြင့်မားသည်။ပင်မလျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများသည် အိမ်တွင် နာမည်ကြီးတံဆိပ်များကို လက်ခံကျင့်သုံးသည်...
ဖန်ပလပ်စတစ်ပုလင်းများတွင် အလိုအလျောက် ပူပြင်းသောငရုတ်ဆီဖြည့်စက်
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် အမြန်အသေးစိတ်အခြေအနေ- မူလနေရာအသစ်- ရှန်ဟိုင်း၊ တရုတ် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်- OEM မော်ဒယ်နံပါတ်- JP-LJM0025 အမျိုးအစား- ငံပြာရည်ပူပူပြုလုပ်သည့်စက် ဗို့အား- 220V/380V ပါဝါ- 3kw အလေးချိန်- 40 တန် အတိုင်းအတာ(L*W*H)။ 2100*1460*1590mm အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်- CE/ISO9001 အာမခံ- တစ်နှစ်တာရောင်းချပြီးနောက် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည်- နိုင်ငံခြားတွင် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် စက်ယန္တရားများအတွက် ရရှိနိုင်သော အင်ဂျင်နီယာများ ထုတ်ကုန်အမည်- ငံပြာရည်ပူပူပြုလုပ်သည့်စက် ပစ္စည်း: 304 Stainless Steel Application: Ki...